တတိယလက်ထောက်အင်ဂျင်နီယာ NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » ဂျော့ဘ် » တတိယလက်ထောက်အင်ဂျင်နီယာချုပ်
အပြုသဘော about: အဆိုပါလက်ပံခရိုင်န်ထမ်းအော်ရီဂွန်ပြည်နယ် 19 Multi-ရည်ရွယ်ချက်ဆည်များနှင့်အနောက်တောင်ပိုင်းဝါရှင်တန်ရှိတစ်ဦးအနည်အနှစ်များ retention ကိုဖွဲ့စည်းပုံ၏စစ်ဆင်ရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကြီးကြပ်။ ငါတို့သည်လည်းနှစ်ခုအစိုးရပိုင် Hopper တွေလည်းသောင်သုံးယောက် hydrographic စစ်တမ်းရေယာဉ်များအသုံးပြုခြင်းမှတဆင့်ဖက်ဒရယ်အညွှန်းလိုင်းများ၏ 720 မိုင်ထက်ပို 33 ရုပ်သံလိုင်းနှင့်ဆိပ်ကမ်းစီမံကိန်းများကိုထိန်းသိမ်းရန်။ သင်ဤရာထူးမရွေးနေတယ်ဆိုရင်သင်တို့သည်ဤအရေးကြီးသောမစ်ရှင်ကိုထောကျပံ့နှင့်လက်ပံခရိုင်အသင်း၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ လက်ပံခရိုင်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ထူးခြားသောမစ်ရှင်အကြောင်းကိုနောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များအတွက်ကိုသွား www.nwp.usace.army.mil.
တစ်ဦး seagoing သင်္ဘောတစ်တတိယလက်ထောက်အင်ဂျင်နီယာချုပ်, သင်လိမ့်မည် automated Hopper တွေလည်းသောင်အဖြစ်:
ဖိအား guages ​​စောငျ့ရှောကျ။ တစ်ဦး log ကိုထိန်းသိမ်းပါ။ အငယ်တန်းအင်ဂျင်နီယာများ၏ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းအလုပ်။
အဓိကပြုပြင်ရေးနှင့်အတူကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်အင်ဂျင်နီယာချုပ်နှင့်အခြားအကြီးတန်းအင်ဂျင်နီယာများ Assist ။
76% သို့မဟုတ် သာ. ကြီး - ဒီအနေအထားဟာသောင်ရေယာဉ်တစ်စီး, သင်္ဘောပေါ်တွင်ခရီးသွား (ရာသီသောင်တူးနေစဉ်အတွင်း) လိုအပ်ပါသည်ဖြစ်ပါတယ်။ အချိန်ဇယားယေဘုယျအားဖြင့်ပယ်အပေါ် 8 ရက်ပေါင်း run နှင့်6ရက်။ Occasionnally အချိန်ဇယားသည်အခြားအချိန်ဇယားပြောင်း။
ကြီးကြပ်ရေး status ကို
4742 Utility ကိုစနစ်များ repair-Operating
ဒါကမဖြစ်မနေမူးယစ်ဆေးစမ်းသပ်ခြင်း Designated ရာထူး (TDP), EP 600-1-300 နှင့်အညီ, 28 ဖေဖော်ဝါရီ 01 ရက်စွဲပါကြည်းတပ်ရဲ့မူးယစ်ဆေး-အခမဲ့ဖက်ဒရယ်လုပ်ငန်းခွင် (DFW) အစီအစဉ်အဘို့အ USACE မူးယစ်ဆေးစမ်းသပ်ခြင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများသည်။
အဘယ်သူသည် Apply နိုင်ပါစေ: အမေရိကန်နိုင်ငံသားများ
အတှေ့အကွုံအမျိုးသားဝန်ဆောင်မှုအစီအစဉ်များကို (ဥပမာ, Peace Corps, AmeriCorps) နှင့်အခြားအဖွဲ့အစည်းများ (; ပရဟိတ; ဘာသာရေး; ဝိညာဉ်ရေးရာ; အသိုင်းအဝိုင်း; ကျောင်းသား; လူမှုရေးဥပမာပရော်ဖက်ရှင်နယ်) မှတဆင့်ပြုမိစေတနာ့ဝန်ထမ်းအလုပ်အပါအဝင်ပေးဆောင်ခြင်းနှင့်မရတဲ့အတှေ့အကွုံကိုရည်ညွှန်းသည်။ သငျသညျစေတနာ့ဝန်ထမ်းအတွေ့အကြုံကိုအပါအဝင်အားလုံးခြေစစ်ပွဲအတွေ့အကြုံအတွက်အကြွေးလက်ခံရရှိလိမ့်မည်။
လိုအပ်သောလေ့ကျင့်သင်တန်းပေးသို့မဟုတ်အတှေ့အကွုံအဘယ်သူမျှမတိကျတဲ့အရှည်ရှိပါတယ်။ သို့သော်သင်အောင်မြင်စွာပုံမှန်ကြီးကြပ်မှုထက်ပိုပြီးမရှိဘဲဤအနေအထားကို၏လုပျငနျးလုပ်ဆောင်ရန်လုံလောက်သောအသိပညာ, ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်စွမ်းရည်အားအပိုင်ကြောင်းကိုသင်၏ကျမ်းစာ၌ရေးထားလျှောက်လွှာပစ္စည်းများမှာပြထားတဲ့အတှေ့အကွုံမှတဆင့်သရုပ်ပြနိုင်ဖြစ်ရပါမည်။
အနိမ့် Qualifications (Element ကိုအထဲက Screen): တစ်တတိယလက်ထောက်အင်ဂျင်နီယာချုပ်-သင်တစ်ဦးသည်လက်ရှိအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကမ်းခြေစောင့်တပ်ဖွဲ့ကုန်သည် Marine Credential (MMC) တတိယလက်ထောက်အင်ဂျင်နီယာချုပ် 2250 မြင်းကောင်ရေ, ဒါမှမဟုတ်ပိုမိုမြင့်မားအပိုင်တစ်ခုသို့မဟုတ်လက်ရှိအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကမ်းခြေစောင့်တပ်ဖွဲ့ကုန်သည် Marine Credential (MMC အပိုင်ရမယ်များအတွက် ) တတိယလက်ထောက်အင်ဂျင်နီယာချုပ် Unlimited မြင်းကောင်ရေအားနှင့်လက်ရှိသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအလုပ်သမားကဒ်ပြား (TWIC) .- သင်သည်သင်၏အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကမ်းခြေစောင့်တပ်ဖွဲ့ကိုယ်စားလှယ်စိစစ်ရေးတင်ရပါမည်သို့မဟုတ်သင်အရည်အချင်းမပြည့်မှီ rated ပါလိမ့်မည် .- Element ကိုတစ်ဦးအရည်အချင်းမပြည့်မှီ rating များဖြစ်ပေါ်လာစေမည်ဒီဖန်သားပြင်ထဲကတွေ့ဆုံရန်ပျက်ကွက်။
ရာသီဥတုအခြေအနေများ, အပူနှင့်ဆူညံသံ၏အစွန်းထိတွေ့။ ချောကုန်းပတ်နှင့်ရေနစ်သေဆုံး၏စိုးရိမ်ရေမှတ်လိုအပ်သောအဖြစ်သင့်လျော်သောလုံခြုံမှုကိုဂီယာနဲ့အကာအကွယ်အဝတ်အစားကိုဝတ်ဆင်လျက်, အသံသည်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုအလေ့အကျင့်လိုက်နာရမည်ရှိပါသည်။ ပူပြင်းတဲ့ပိုက်, ရေနွေးငွေ့ထွက်ပြေးလာသူများနှင့်အက်ဆစ်, အရည်များနှင့်ဆေးသုတ်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများထိတွေ့နိုင်ပါသည်။
အလုပ်အလယ်အလတ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအားထုတ်မှုလိုအပ်ပါတယ်။ LIFT နှင့်ပုံမှန် 45 ပေါင်အထိပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများသယ်ဆောင်။ နှင့်ရံဖန်ရံခါ 45 ပေါင်ကျော်။ အလုပ်လမ်းလျှောက်ခြင်းနှင့်တောင်တက်, အချိန်ကြာမြင့်စွာရပ်လိုအပ်တယ်, အနိမ့်ပြန်၏ခေတ္တခဏဖြစ်စေနိုင်သည်အားလုံးသော။ အဆိုပါဝန်ထမ်းနောက်ကျောအောက်ပိုင်းကောင်းသောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခွအေနေကိုထိနျးသိမျးရမယျ။ လက်ရှိအရောင်နဲ့အတိမ်အနက်ကိုအမြင်ဝင်စားခြင်းနှင့်တာဝန်များကိုလုပ်ဆောင်နိုင်ရန်အတွက်အနိမ့်မြင်ကွင်းအခြေအနေများအားဖြင့်မြင်နိုင်ဖြစ်ရပါမည်။
ဒီဇင်ဘာလ 31, 1959 ပြီးနောက်မွေးဖွားအထီးလျှောက်ထား, ရွေးချယ်ဝန်ဆောင်မှုမှတ်ပုံတင်ခြင်းများအတွက်အကြို-အလုပ်အကိုင်အသိမှတ်ပြုလက်မှတ်ဖော်ပြချက်ဖြည့်စွက်ရပေမည်။
နှစ်ဦးကတစ်နှစ်စမ်းသပ် / probationary ကာလလိုအပ်နိုင်ပါသည်။
Pay ကိုတိုက်ရိုက် Deposit လိုအပ်ပါသည်။
ဒီအနေအထားထို့နောက်နှစ်စဉ် entry ကိုအပေါ်သို့ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာရေးထုတ်ဖော်အစီရင်ခံစာ (OGE 278) သို့မဟုတ်တစ်လျှို့ဝှက်ဘဏ္ဍာရေးထုတ်ဖော်အစီရင်ခံစာ (OGE450) တင်ပြရန်နှင့်ရန်သင့်အားလိုအပ်သည်။
သငျသညျဖက်ဒရယ်ဝန်ဆောင်မှုကနေအနားယူခဲ့ကြပြီးသင်က reemployed annuitant အဖြစ်အလုပ်အကိုင်အစိတ်ဝင်စားလျှင်, Reemployed Annuitant သတင်းအချက်အလက်စာရွက်ထဲတွင်သတင်းအချက်အလက်များကြည့်ရှုပါ။
ဒါကအလုပ်ရှာဖွေရေးအစီအစဉ် (က CP) 29 အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။
သငျသညျစစ်ရေးအိမ်ထောင်ဖက် preference ကိုတောင်းဆိုလိမ့်မည်။
interagency အလုပ်ရှာဖွေရေးေူပာင်းလဲရေးကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအစီအစဉ် (ICTAP) ။ သင်အပြိုင်အဆိုင်ဝန်ဆောင်မှုအတွက်ဖက်ဒရယ်န်ထမ်းများမှာနှင့်သင့်အေဂျင်စီသင်သည် ICTAP ထည့်သွင်းစဉ်းစားဘို့အရည်အချင်းပြည့်မီတဲ့အိုးအိမ်မဲ့န်ထမ်းဖြစ်ကြောင်းရေးသား၌သင်တို့ကိုအကြောင်းကြားထားပြီးလျှင်, သင်ရွေးချယ်ရေးဦးစားပေးလက်ခံရရှိလိမ့်မည်။ ဒီရာထူးရွေးချယ်ရေးဦးစားပေးလက်ခံရရှိရန်, သင်ရမယ်: (1) ICTAP အရည်အချင်းပြည့်မီစံတွေ့ဆုံရန်; (2) အထက် 90 သို့မဟုတ်တစ်ရမှတ်အတူအနေအထားများအတွက်ကောင်းစွာ-အရည်အချင်းပြည့် rated ကြလိမ့်မည် နှင့်, (3) သင့် ICTAP အရည်အချင်းပြည့်မီကိုထောကျပံ့ဖို့သင့်လျော်သောစာရွက်စာတမ်းများတင်ပြရန်။ program ကိုအကြောင်းကိုအပိုဆောင်းသတင်းအချက်အလက် OPM ရဲ့အလုပ်ရှာဖွေရေးေူပာင်းလဲရေးအရင်းအမြစ်များက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်။
လက်ရှိအချိန်-In-grade ကိုကန့်သတ် (ရှိလျှင်) နှင့်အောက်ပါလိုအပ်ချက်များကိုတွေ့ဆုံအပေါ်သို့အနေအထားပစ်မှတ်ထားဖို့ Non-အပြိုင်အဆိုင်မြှင့်တင်ရေးတို့အတွက်အရည်အချင်းပြည့်မီဖြစ်နိုင်သည်: (1) လက်ရှိပစ်မှတ်တန်းအဆင့်မှာလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းပြသ; (2) အဆင့်မြင့် level ကိုအလုပ်ပစ်မှတ်တန်းအဆင့်မှာတည်ရှိ; (3) တိုးမြှင့်တာဝန်ဝတ္တရားတာဝန်ပေးအပ်ကြသည်; (4) ကြီးကြပ်ရေးမှူးမြှင့်တင်ရေးအကြံပြု; (5) လက်ရှိသမ္မတအားလုံးလိုအပ်သောလေ့ကျင့်သင်တန်းပေးနှင့်အလုပ်အကိုင်အခြေအနေများပြီးဆုံး; နှင့် (6) လက်ရှိသမ္မတအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလှေကားပရိုမိုးရှင်းအတွက်အားလုံးစည်းမျဉ်းလိုအပ်ချက်များကိုပြီးဆုံး။ အကျိုးဆက်အားမြှင့်တင်ရေးကိုအာမခံပေးမထားပါ။
ဒီကြေငြာချက်ကနေနောက်ထပ်အောင်လက်မှတ်ဒီ၏ပိတ်ပွဲနေ့စွဲကျော်လွန် 90 ရက်ရာအရပျကိုခြီယူစေခြင်းငှါ
သငျသညျ တင်ရပါမည် သင့်ရဲ့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကမ်းခြေစောင့်တပ်ဖွဲ့သံတမန်ဆောင်ဧည် သို့မဟုတ်သင်အရည်အချင်းမပြည့်မှီ rated လိမ့်မည်။
အဆိုပါကြေညာချက်အပိတ်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတာနဲ့သင့်လျှောက်လွှာအထုပ် (ကိုယ်ရေးရာဇဝင်, စာရွက်စာတမ်းများ supporting, နှင့်မေးခွန်းလွှာမှတုံ့ပြန်မှု) ၏သုံးသပ်ချက်ကိုသင်ဤကြေငြာချက်အပေါ်ဖော်ပြထားသောအရည်အချင်းများလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းခြင်းရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်အသုံးပြုလိမ့်မည်။ သငျသညျအနည်းဆုံးအရည်အချင်းပြည့်မီပါက, သင့်ရဲ့ကိုယ်ရေးရာဇဝင်နှင့်အထောက်အထားစာရွက်စာတမ်းများအတှေ့အကွုံသင့်ရဲ့အဆင့်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်ဖို့အကဲဖြတ်မေးခွန်းလွှာရန်သင့်တုံ့ပြန်မှုဆန့်ကျင်နှိုင်းယှဉ်ပါလိမ့်မည်။ သင့်ရဲ့ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ကိုပြန်လည်သုံးသပ်နှင့် / သို့မဟုတ်စာရွက်စာတမ်းများထောက်ပံ့ပြီးနောက်တစ်ပြဌာန်းခွင့်သင်သည်သင်၏အရည်အချင်းများနှင့် / သို့မဟုတ်အတွေ့အကြုံကိုဖောင်းပြီဖန်ဆင်းသည်ဆိုပါက, သင်သည်ဤအနေအထားများအတွက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားမဆုံးရှုံးစေနိုင်သည်။ လျှောက်ထား, အမှားအယွင်းများသို့မဟုတ်ပျက်ကွက်သင့်ရဲ့အရည်အချင်းပြည့်မီကိုထိခိုက်စေခြင်းငှါလာသောအခါအားလုံးညွှန်ကြားချက်ဂရုတစိုက်အတိုင်းလိုက်နာပါ။
သတင်းအချက်အလက်ရွေးချယ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းထည့်သွင်းစဉ်းစားသို့ခေါ်ဆောင်သွားစေခြင်းငှါအဖြစ်သင်သည်သင်၏ကိုယ်ရေးရာဇဝင်အတွက်မဆိုသက်ဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်စိစစ်ရေးနှင့်မက်လုံးပေးဆုစာရင်းပြုစုသင့်တယ်။ မရွေးလိုလျှင်, သင်စာရွက်စာတမ်းများကိုထောက်ပံ့ပေးရန်လိုအပ်နိုင်ပါသည်။
Rating များအတွက်အခြေခံ : အကောင်းဆုံးအရည်အချင်းပြည့်မီသော, Highly အရည်အချင်းပြည့်မီသောနှင့်အရည်အချင်းပြည့်မီသော: အရည်အချင်းပြည့်မီသောကိုယ်စားလှယ်လောင်းသုံးအရည်အသွေးကိုအမျိုးအစားတွေထဲကမှတာဝန်ပေးအပ်ပါလိမ့်မည်။ ဝါရင့် preference ကိုအရည်အချင်းပြည့်မီရှေ့အသီးအသီးအရည်အသွေးအအမျိုးအစားအတွင်း Non-preference ကိုအရည်အချင်းပြည့်မီ၏စာရင်းနေကြသည်။
ပြည်သူ့ Trust မှ - နောက်ခံသမိုင်းကြောင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးရေး
သငျသညျတင်ပြရန်လိုအပ်သည်အဆိုပါစာရွက်စာတမ်းများကိုသင်ဖက်ဒရယ်အလုပ်အကိုင်အတွက် preference ကိုများအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မီဖြစ်စေမအပေါ်အခြေခံပြီးကွဲပြားသည်။ preference ကိုအမျိုးအစားနှင့်ဆက်စပ်လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ၏ပြီးပြည့်စုံသောဖော်ပြချက်ဟာလျှောက်ထားသူစာရင်း (ပြင်ပ) တွင်ဖြစ်ပါသည်။
အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း, သင့်ပြီးပြည့်စုံသောလျှောက်လွှာကိုသင်၏ကိုယ်ရေးရာဇဝင်, အွန်လိုင်းမေးခွန်းလွှာရန်သင့်တုံ့ပြန်မှုများနှင့်လျှောက်ထားရန်သင့်ရထိုက်ခွင့်သက်သေပြပေးသောစာရွက်စာတမ်းများပါဝင်သည်။ သင်တို့သည်ဤစာရွက်စာတမ်းများပေးရန်ပျက်ကွက်လျှင်, သင်မပြည့်စုံသောလျှောက်လွှာအထုပ်ရှိခြင်းအဖြစ်မှတ်သားမည်ဖြစ်ပြီးသင်သည်မည်သည့်နောက်ထပ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားမည်မဟုတ်ပါ။
1 ။ သင့်ရဲ့ကိုယ်ရေးရာဇဝင်:
သင့်ရဲ့ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ဆို format နဲ့တင်သွင်းစေခြင်းငှါနှင့်ဤကြေငြာချက်ထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့အထူးပြုအတွေ့အကြုံကိုကိုထောကျပံ့ရမည်ဖြစ်သည်။
အရည်အချင်းများအဘို့သင့်ကိုယ်ရေးရာဇဝင်တစ်ပတ်ကိုအလုပ်လုပ်ခဲ့နာရီနှင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အများ၏ရက်စွဲများ (တင်ဆက်ဖို့လ / တစ်နှစ်သို့မဟုတ်လ / နှစ်ကမှရက်သတ္တပတ်များနှင့်လ / တစ်နှစ်လျှင်ဆိုလိုသည်မှာနာရီ) ပါဝင်ရပါမည် determinations ။ သင့်ရဲ့ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ဤအချက်အလက်ဆံ့မပါဘူးဆိုရင်, သင့်လျှောက်လွှာမပြည့်စုံအဖြစ်မှတ်သားမည်ဖြစ်ပြီး အကယ်. သင်ဤအနေအထားများအတွက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားလက်ခံရရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
2 ။ အခွားသော supporting စာရွက်စာတမ်းများ:
ဒီအနေအထားဟာအလုပ်-related လိုင်စင်သို့မဟုတ်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်လိုအပ်သည်။ သင်သည်သင်၏လျှောက်လွှာကိုအထုပ်နှင့်သင်၏လိုင်စင်သို့မဟုတ်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်မိတ္တူတင်ပြရမည်သို့မဟုတ်သင်အရည်အချင်းမပြည့်မှီ rated လိမ့်မည်။ ကြည့်ရှုပါ: မှူးနှင့်လိုင်စင်များ
မှတ်ချက်: လျှောက်လွှာအထုပ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အဖြစ်တင်သွင်းစာရွက်စာတမ်းများ, ဖြည့်စွက်စာရွက်စာတမ်းများပါဝင်သည်ငှါ, လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ရုံးကျော်လွန် shared နိုင်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့သောစစ်တပ်အမိန့်များနှင့်လက်ထပ်ထိမ်းမြားလက်မှတ်များအဖြစ်တချို့ကဖြည့်စွက်စာရွက်စာတမ်းများကိုသင်ထက်အခြားသူတစ်ဦးဦးအဘို့အပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုင်နိုင်ပါသည်။ သင်လျှောက်လွှာတင်သွင်းမတိုင်မီအခြားလူတစ်ဦး၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်, ဤစာရွက်စာတမ်းများ sanitize လိမ့်မည်။ သင်သည်သင်၏အရည်အချင်းပြည့်မီအတည်ပြုရွေးချယ်နေကြသည်လျှင်သင်စာရွက်စာတမ်းများတစ်ဦးကို un-sanitized ဗားရှင်းများကိုမေးသော်နိုင်ပါသည်။
ပညာရေးကအရည်အချင်းများဆီသို့ဦးတည်အသိအမှတ်ပြုခံရဖို့အဘို့အလို့ငှာပညာရေးကိုအမေရိကန်ဦးစီးဌာနတို့ကအသိအမှတ်ပြုထားတဲ့အသိအမှတ်ပြုအဖွဲ့အစည်းများကအသိအမှတ်ပြုရပါမည်။ ထို့ကြောင့်, ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကအမေရိကန်ဦးစီးဌာနအသိအမှတ်ပြုအသိအမှတ်ပြုအဖွဲ့အစည်းများအားဖြင့်အသိအမှတ်ပြုကျောင်းများအနေဖြင့်သာတက်ရောက်သူနှင့် / သို့မဟုတ်ဒီဂရီပေး။
အမေရိကန်အစိုးရနှင့်အတူတစ်ဦးကအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှာပြည့်စုံသောအကျိုးကျေးဇူးများကိုအထုပ်နှင့်အတူန်ထမ်းပေးပါသည်။ ဖက်ဒရယ်န်ထမ်းအဖြစ်, သင်နှင့်သင့်မိသားစုသင့်ရဲ့ဖက်ဒရယ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအလွန်အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေရန်ဒီဇိုင်းဖြစ်ကြောင်းအကျိုးကျေးဇူးများကိုတစ်ဦးအကွာအဝေးမှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိလိမ့်မည်။ ဖက်ဒရယ်အကျိုးကျေးဇူးများကိုအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
အကျိုးခံစားခွင့်များအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မီသငျသညျကိုကိုင်ထားအနေအထားအမျိုးအစားပေါ်နှင့်သင့်အနေအထားအချိန်ပြည့်, အခြိနျပိုငျး, ဒါမှမဟုတ်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းသည်ဖြစ်စေမူတည်သည်။ ကမ်းလှမ်းတိကျတဲ့အကြိုးခံစားခှငျ့အပေါ်ပိုမိုသောအချက်အလက်များများအတွက်ငှားရမ်းအေဂျင်စီကိုဆက်သွယ်ပါ။
SoftAtHome, MStar, CES2017 ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် 2018-04-30